प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति आशा छ, भरोसा छैन - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति आशा छ, भरोसा छैन
मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतो भन्छन् : इलाकालाई आधार बनाएर अघि बढ्ने निर्णयले शंका पैदा गर्‍यो
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दशैँअघि नै संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने वाचा गरेपछि मोर्चा पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। मोर्चा आफूले समर्थन गरेको सरकारबाट आफ्ना माग सम्बोधन हुनेमा कत्तिको ढुक्क होला त? यही सेरोफेरोमा मधेसी मोर्चाका नेता तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग चन्द्रलाल गिरीले गरेको वार्ता :
मधेसी मोर्चा र सरकारबीच संविधान संशोधनमा कुरा मिल्न लागेको हो?
कुरा मिलाउन खोजे त मिलिहाल्छ नि। कुनै जटिल समस्या नै के छ र? अहिलेसम्म मिलाउन खोजिएन। त्यसैले नमिलेको न हो। अन्तरिम संविधानमा मिलेका कुरासमेत बिगारेकाले न मधेस आन्दोलन भएको हो। विगतमा सम्झौता भएका थिए। त्यसैले नमिलेको कुरालाई मिलाउने भन्दा पनि मिलेको कुरालाई पनि बिगार्ने काम भए।
गत मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेपछि संविधान संशोधनको विषय टुंगिन लागेको होइन र?
प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा हामीले तीन बुँदे समझदारी गरेका थियौं। सझदारी अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीमा उहाँलाई मतदान गरेर एउटा बुँदा तुरुन्तै लागू गर्‍यौं। दुई महिना हुन लागिसक्यो सरकारले बाँकी दुई वटा बुँदा अझै कार्यान्वयन गरेको छैन। बुँदा नम्बर दुईको केही आंशिक काम भयो। अझै मुद्दा फिर्ता हुन बाँकी नै छ। त्यति मात्र होइन, सम्झौताको मुख्य बुँदा नम्बर एक जुन संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ, त्यो प्रस्ताव अहिलेसम्म संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन। मोर्चाको निर्णयअनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीलाई तीन वटा प्रश्न राख्यौं। पहिलो, संविधान संशोधनको प्रस्ताव कहिले दर्ता हुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन? दोस्रो, आन्दोलनताका लगाइएका मुद्दा फिर्ता कहिले हुन्छ? तेस्रो, इलाकालाई आधार मानेर गाउँपालिका बनाउने र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरा हामीलाई मान्य हुन्न। मधेस र जनजातिको समस्या हल नहुँदासम्म चुनाव हुन दिन्नौं।
राज्यको पुनर्संरचना नभई कसरी निर्वाचन हुनसक्छ?
प्रधानमन्त्रीले दशैंअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढ्छ भन्नु भएको छ। मुद्दा फिर्ता लिने काम प्रक्रियामा छ। त्यसका लागि तपाईंहरुसँग छलफल चलाएर दशैंअघि नै काम हुन्छ भन्नु भएको थियो। स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि तपाईंहरुको समझदारी र सहभागिताबिना हुँदैन र त्यसमा धेरै शंका उपशंका नगर्नु होला भन्नुभयो। तर, इलाकालाई नै आधार बनाएर अघि बढ्ने निर्णयले शंका पैदा गरेको छ।
उसो भए तपाईंहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भरोसामा हुनुहुन्छ, होइन?
हामी आशावादी छौं। निराश छैनौं। तर, पूर्णरुपले भरपर्ने अवस्था पनि छैन। काम गरेपछि मात्र भरोसा हुन्छ। यस्ता सम्झौता र प्रतिबद्धता धेरै भएका छन्।
सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको संविधान संशोधन प्रस्ताव तपाईंहरुसँगको छलफलपछि नै तयार भएको हो?
प्रस्ताव हामीकहाँ आएको छैन। सरकारले प्रस्तावबारे कुनै छलफल पनि गरेको छैन। अनौपचारिक रुपमा के तयारी भइरहेको छ, त्यो हामीलाई थाहा छैन।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर पुराना इलाकालाई नै गाउँपालिका बनाउने सहमति गरे नि?
हामीले पनि प्रचण्डजीलाई त्यही प्रश्न राख्यौं। उहाँले कुनै शंका नगर्न भन्नुभएको छ। एमाले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले उसको पनि सहमति लिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।
उपेन्द्र यादव त वार्ता सफल भएन भने छठपछि आन्दोलन गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, मोर्चाभत्रि यसमा एक मत छ?
एक मत त पहिलेदेखि नै छ। माग पूरा भएनन् भने त हामीसँग आन्दोलनको विकल्प नै छैन। प्रधानमन्त्रीले दशैं र तिहारसम्म माग पूरा गर्छु भन्नुभएको छ। त्यतिबेलासम्म त पर्खनु पनि त पर्‍यो।
संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा दिल्लीमा छलफल भयो, यसलाई चाहीँ कसरी लिनुभएको छ?
हो। हामीसँग कुरा गर्न छाडेर अरुसँग कुरा गर्न जाने, अनि हामीलाई दबाब दिन खोज्ने? ओलीजीले पनि कमल थापालाई पठाएर भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई चार बुँदे प्रस्तावमाथि छलफल गरे। यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? खाली उल्टो–उल्टो काम गर्ने अनि कुराचाहिँ राष्ट्रवादको? अनौठो चलन छ। मधेस आन्दोलनलाई भारतसँग जोड्ने काम गरियो। नेपाली जनताले उठाएको मागबारे त हामीसँगै कुरा गर्ने हो नि।
१७ महिनामा तीनवटा चुनाव सकेर संविधान कार्यान्वयन होला भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ?
अहिलेकै गति र कार्यशैलीले त केही हुँदैन। असफलताबाहेक अरु हात लाग्दैन। तर दृढ इच्छा शक्ति राखेर काम गरे असम्भव छैन।
संविधान सशोधनको नयाँ प्रस्तावमा पूर्वमा सुनसरी–मोरङ–झापा पनि नचलाउने र पश्चिममा कैलाली–कञ्चनपुरलाई यथावत् राखी नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको थारु प्रदेश बनाउने कुरा चलेको छ, मोर्चाको धारणा के छ?
हामीकहाँ औपचारिक प्रस्ताव नआई यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाउन भएन। प्रस्ताव आए मात्र हाम्रा धारणा सार्वजनिक गर्छौं। हाम्रो मान्यता हो, झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेसमा दुईवटा प्रदेश हुनुपर्छ।
प्रकाशित १३ असोज २०७३, बिहिबार | 2016-09-29 18:29:45